स्थानीय तहमा कुन दलले कहाँ आफ्नो वर्चश्व कायम राखे, कसले कहाँ गुमाए ? (तथ्याङ्कसहित) | Ratopati
स्थानीय तहमा कुन दलले कहाँ आफ्नो वर्चश्व कायम राखे, कसले कहाँ गुमाए ? (तथ्याङ्कसहित)
personसुदर्शन आचार्य exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर १६, २०७६ chat_bubble_outline1
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका गरी ५२ स्थानका लागि शनिबार उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो । उपनिर्वाचनको सोमबार अन्तिम नतिजा आइसकेको छ ।
यो समाचारमा भने रातोपाटीले स्थानीय तहका एक उपमहानगर प्रमुख, तीन गाउँपालिका प्रमुख, एक गाउँपालिका उपाध्यक्ष र ४३ वटा वडाध्यक्ष पदका लागि भएको उपनिर्वाचनमा कुन दलले कहाँ आफ्नो वर्चश्व कायम राखे, कसले कहाँ गुमाए भन्ने विषयमा आधारित रहेर चुनावी परिणामको समीक्षा गरेको छ । हेरौँ, स्थानीय तहमा कुन दलको अवस्था कस्तो रह्यो ?
उपनिर्वाचन अन्तर्गत पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा नेकपाका वीरबहादुर कुरुम्वाङ ५ हजार ३६९ मत ल्याएर विजयी भए । २०७४ सालको निर्वाचनमा यस गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका सञ्चकुमार केरुङ दुई हजार ९९६ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि नेकपाले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा यो गाउँपालिकामा काँग्रेसको बर्चश्व तोडेको हो ।
पाँचथरकै फिदिम नगरपालिका–१ को वडाध्यक्षमा पनि नेकपा विजयी भएको छ । नेकपाका उम्मेदवार गजाधर भट्टराईले एक हजार ४४६ मत ल्याए । २०७४ को निर्वाचनमा उक्त पदमा काँग्रेसका हर्कबहादुर मोक्तान ७७४ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । यस वडामा अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा उपनिर्वाचनमा काँग्रेसले मत बढाए पनि जित हासिल गर्न सकेनन् ।
पाँचथरकै हिलिहाङ गाउँपालिका–७ वडाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेस विजयी भएको छ । काँग्रेसका उम्मेदवार तिलविक्रम इधिङ्गो ८४२ मत ल्याएर विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिश्पर्धी नेकपाका गेहनाथ रिजालले ८१२ मत ल्याए । अघिल्लो निर्वाचनमा सो पदमा तत्कालिन नेकपा एमालेका तीर्थराज तिम्सिनाले ७१९ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । पार्टी एकताका बाबजुद यो वडामा नेकपाले आफ्नो बर्चश्व गुमाउन पुग्यो ।
यस्तै, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली काँग्रेसका तिलक राई २६ हजार ७०९ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । यसअघि भएको निर्वाचनमा उपमहानगर प्रमुख पदमा तत्कालीन एमालेका तारा सुब्बा २० हजार ९७५ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । उपनिर्वाचनमा नेकपाका उम्मेदवार प्रकाश राईले उपमहानगर प्रमुख पदमा २३ हजार ९१४ मत ल्याए । नेकपाले उपनिर्वाचनमा गुमाउनु परेको स्थानीय तहमध्ये यो नै मुख्य हो ।
धरान उपमहानगरपालिकाकै वडा नम्बर ७ को वडाध्यक्ष पदका लागि भएको उपनिर्वाचनमा नेकपाका उम्मेदवार जीवनराज सुवेदी ६२२ मत ल्याएर विजयी भए । उपनिर्वाचनमा सबैभन्दा थोरै मतान्तरले विजयी हुने क्रममा उनले निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका सुवर्णमोहन पालिखेलाई एक मतले पराजित गरे । पालिखेले ६२१ मत ल्याए । अघिल्लो निर्वाचनमा यहाँ तत्कालीन एमालेका भुपेन्द्रराज मोक्तान ६३६ मत ल्याएर विजयी भएका थिए ।
मोरङको धनपालथान गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ को वडाध्यक्ष पदका लागि भएको उपनिर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका नारायणप्रसाद साह एक हजार ७०१ मत ल्याएर विजयी भए । २०७४ को निर्वाचनमा यस वडामा तत्कालिन एमालेका बलीराम भगत एक हजार १४६ मत ल्याएर विजयी भएका थिए ।
संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष पदका लागि भएको उपनिर्वाचनमा नेकपाका तेजबहादुर पोख्रेल तीन हजार १८ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका विमन पराजुलीले दुई हजार २१६ मत ल्याए । अघिल्लो निर्वाचनमा यो पदमा तत्कालीन एमालेका खड्गबहादुर कटुवाल एक हजार ७१२ मत ल्याएका थिए ।
यस्तै, संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका वडा नम्बर ३ को वडाध्यक्ष पदमा नेकपाका भरतकुमार घिमिरे ७९६ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी काँग्रेसका विक्रम गुरुङले ४६७ मत हासिल गरे । यो सिटमा यसअघिको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका तोयानाथ ढुंगाना ४९० मत ल्याएर विजयी भएका थिए ।
भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिका वडा नम्बर १ को वडाध्यक्ष पदका लागि भएको निर्वाचनमा नेकपाका जितेन्द्र राई ६९१ मतसहित विजयी भएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा यस सिटमा नेपाली काँग्रेसका रुद्रबहादुर पाण्डे ४३४ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए ।
यस्तै, खोटाङको साकेला गाउँपालिका वडा नम्बर ३ को वडाध्यक्षमा नेकपाकी शिवकला राई ३९१ मत ल्याएर विजयी भइन् । उनका प्रतिस्पर्धी काँग्रेसका शुक्रबहादुर तामाङले ३७४ मत ल्याए । अघिल्लो निर्वाचनमा यहाँ तत्कालीन एमालेका मणिकुमार राई २७९ मत ल्याएर विजयी भएका थिए ।
यस्तै, सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ मा वडाध्यक्ष पदका लागि भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका प्रमिलादेवी यादव ५४० मत ल्याएर विजयी भएकी छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपाका अच्छेलाल यादवले ५२९ मत ल्याए । अघिल्लो निर्वाचनमा यहाँ राजपा नेपालकै प्रभाकर यादव २८८ मत ल्याएर विजयी भएका थिए ।
यस्तै, सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १२ को वडाध्यक्ष पदमा नेकपाका दिलिपकुमार यादव ८२५ मत ल्याएर विजयी भए । उनका प्रतिद्वन्द्वी राजपा नेपालका प्रदीपकुमार महतोले ६५४ मत प्राप्त गर्दा काँग्रेसका राजकुमार मुखियाले ६१५ मत पाए । अघिल्लो निर्वाचनमा यस पदमा काँग्रेसका रामदेव यादव ६२२ मत ल्याएर विजयी भएका थिए ।
रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा वडाध्यक्ष पदका लागि भएको उपनिर्वाचनमा नेकपाका कुलबहादुर बस्नेत ७६९ मत ल्याएर विजयी भए । अघिल्लो निर्वाचनमा यस वडाको वडाध्यक्षमा तत्कालीन एमालेबाट कुविरबहादुर खत्री ४३६ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए ।
यस्तै, महोत्तरीको बलवा नगरपालिकाको वडा नम्बर २ को वडाध्यक्षमा काँग्रेसका विपिन पजियार सुडी ४६१ मतसहित विजयी भएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा यस वडाको वडाध्यक्षमा काँग्रेसकै राजकुमार साह ३७९ मतसहित विजयी भएका थिए ।
सोही नगरपालिकाको वडानम्बर ८ मा समाजवादी पार्टीका रामबाबु महतो ६५९ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा यस वडाको वडाध्यक्षमा समाजवादी पार्टीकै लोकिन्दर महतो कोइरी २८८ मतसहित विजयी भएका थिए ।
महोत्तरीकै पिपरा गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपाका विक्रम चौधरी ३ हजार दुई सय ४९ मतसहित विजयी भए । यो गाउँपालिकाका अघिल्लो निर्वाचनमा राजपा नेपालका विनोदकुमार चौधरी २ हजार ७७५ मतसहित निर्वाचित भएका थिए । प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी राजपा नेपालले आफ्नो वर्चश्व गुमाएको स्थानीय तहमध्ये यो एक हो ।
महोत्तरीकै मटिहानी नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ को वडाध्यक्षमा राजपा नेपालका रामबाबु नायक निर्वाचित भएका छन् । उनले ३७५ मत हासिल गर्दा उनका निकटम प्रतिस्पर्धी नेकपाका मोहम्मद जाकिर अन्सारीले ३५५ मत ल्याए । अघिल्लो निर्वाचनमा यस वडाको वडाध्यक्षमा राजपा नेपालकै संजयकुमार मण्डल ३२३ मतसहित विजयी भएका थिए ।
यस्तै, सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका वडा नम्बर १ को वडाध्यक्ष पदमा समाजवादी पार्टीका श्यामबाबु राय ३४७ मतसहित विजयी भए । यस स्थानमा अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमालेका कुमार लामा ६२८ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए ।
रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाको वडा नम्बर २ को वडाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका दीपेन्द्र श्रेष्ठ ७७१ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । सो पदमा अघिल्लो निर्वाचनमा राजपा नेपालका जोगेन्द्रदास तत्मा ५१६ मत ल्याएर विजयी भएका थिए ।
यस्तै, बाराको बारागढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ को वडाध्यक्षमा समाजवादी पार्टीका सुरेशप्रसाद चौधरी ७४९ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् । यो वडामा अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका नन्दलाल राय थारु ४३३ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए । उपनिर्वाचनमा काँग्रेसले यस वडामा ४७१ मत हासिल गरेको छ ।
पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ को वडाध्यक्षमा समाजवादी पार्टीका रुपलालकुमार यादव एक हजार ३१ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् । यसअघि उक्त वडामा संघीय समाजवादी फोरमका बृजमोहन राय यादव ६९४ मत ल्याएर विजयी भएका थिए ।
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ को वडाध्यक्षमा नेकपाका केदारनाथ आचार्य ७१२ मतसहित निर्वाचित भएका छन् । यसअघि उक्त वडामा नेपाली काँग्रेसका धनबहादुर श्रेष्ठ ३६४ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । उपनिर्वाचनमा काँग्रेस उम्मेदवार राले तामाङले ४३९ मत ल्याए ।
काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिकाको वडा नम्बर २ को वडाध्यक्षमा नेकपाका देवप्रसाद कोइराला ८६७ मतसहित निर्वाचित भएका छन् । यसअघि उक्त वडामा तत्कालीन एमालेका राजन कोइराला ८३६ मतसहित निर्वाचित भएका थिए ।
काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाको ३ नम्बर वडाको वडाध्यक्षमा नेकपाका शिवभक्ति बलामी ६१८ मतसहित निर्वाचित भएका छन् । यस वडामा अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका नानीबाबु बस्नेत २९७ मतसहित निर्वाचित भएका थिए ।
चितवनको भरतपुर नगरपालिका–१६ को वडाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका अमृतराज हमाल ३ हजार १८३ मतसहित विजयी भएका छन् । यस वडामा अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका चतुरमान गुरुङ २ हजार १३२ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । पार्टी एकताका बाबजुद यस वडामा नेकपाले आफ्नो साख जोगाउन नसकेको हो ।
चितवनकै खैरहनी नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ को वडाध्यक्षमा काँग्रेस उम्मेदवार देवबहादुर बस्नेत १ हजार १३८ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उक्त वडामा नेकपाका वेदबहादुर अधिकारी ९८६ मतमा सीमित भए । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि यहाँ काँग्रेसले नै जित हासिल गरेको थियो भने उपनिर्वाचनमा जित हासिल गर्ने क्रममा अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा काँग्रेसको मत बढेको छ ।
सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ मा काँग्रेसकै प्रतिमा कार्की ८४२ मतसहित विजयी हुँदा नेकपाका उम्मेदवार पुननारायण प्रधानले ७५६ मत प्राप्त गरे । अघिल्लो निर्वाचनमा काँग्रेस नै विजयी भएको यस वडामा उपनिर्वाचनमा काँग्रेसको मत विगतको तुलनामा बढेको देखिन्छ ।
यस्तै लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका–४ को वडाध्यक्ष पदमा नेकपाका नविनकुमार श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । उनले ९८९ मत हासिल गरे । अघिल्लो निर्वाचनमा यस वडामा काँग्रेसका कृष्णराज खनिया ५६२ मतसहित विजयी भएका थिए । पार्टी एकतापछि नेकपाले काँग्रेसबाट फुत्काएको स्थानीय तहमध्ये यो पनि एक हो ।
बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका–२ को वडाध्यक्षमा नेकपाका ढालप्रसाद शेरचन ७०४ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा यस वडामा तत्कालीन एमालेका विष्णुप्रसाद भुसाल ६१४ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए । पार्टी एकतापछि यस वडामा पनि तुलनात्मक रुपमा नेकपाको मत बढेको देखिदैँन ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को बुङ्दीकाली गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को वडाध्यक्षमा नेकपाकै खिमबहादुर थापा खरु मगर ३६७ मतसहित विजयी भए । अघिल्लो निर्वाचनमा यस वडामा तत्कालीन एमालेका दलबहादुर खरु मगर ३८४ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । पार्टी एकता भए पनि यस वडामा नेकपाको मत तुलनात्मक रुपमा बढ्न सकेको देखिएन ।
गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–६ को वडाध्यक्षमा नेकपाका गिरीप्रसाद सिञ्जाली ८०२ मत ल्याएर विजयी भए । अघिल्लो निर्वाचनमा यस वडामा तत्कालीन नेकपाका पूर्णबहादुर रेगामी ६३८ मत सहित निर्वाचित भएका थिए ।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१० को वडाध्यक्षमा राजपा नेपालबाट मञ्जु मिश्र ८६८ मतसहित विजयी भएकी छन् । यसअघि यो वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवार सकुन्तला भारतीले जित हासिल गरेकी थिइन् ।
अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका–३ को वडाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका शोभाखर खनाल एक हजार १५९ मतसहित विजयी भए । अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार जीवनकुमार चौहान एक हजार ४ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । पार्टी एकताका बाबजुद नेकपाले यो वडामा आफ्नो साख जोगाउन सकेन । यस वडामा नेकपाका उम्मेदवार यमलाल खनालले एक हजार ५३ मत हासिल गरे ।
प्युठानको प्युठान नगरपालिका–२ को वडाध्यक्षमा नेकपाका मुक्ति पोख्रेल एक हजार १२७ मत ल्याएर विजयी भए । यस वडामा अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालिन एमालेका खिमबहादुर विष्ट ८०० मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए ।
प्युठानकै ऐरावती गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ को वडाध्यक्षमा नेकपाका द्रोणप्रसाद पाण्डे र वडा नम्बर २ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार भिमेशकुमार घर्तीमगर विजयी भए । पाण्डेले ६९६ मत पाए भने घर्तीमगरले ८५५ मत हासिल गरे । अघिल्लो निर्वाचनमा वडा नम्बर १ मा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार पदम थापा ६३८ मत हासिल गर्दै विजयी भएका थिए । यस्तै २ नम्बर वडामा अघिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केशवराज आचार्य विजयी भएका थिए ।
रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–१ को वडाध्यक्षमा नेकपाका जनकबहादुर बुढामगर १७४ मत ल्याएर विजयी भए । उनी उपनिर्वाचनमा सबैभन्दा कम मत हासिल गरेर विजयी हुने जनप्रतिनिधिसमेत हुन् । अघिल्लो निर्वाचनमा उक्त वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवार फर्कबहादुर बुढा मगर ३५९ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए ।
यस्तै दाङको घोराही उपमहानगर–१६ मा नेपाली काँग्रेसका ताराबहादुर डिसी एक हजार २१८ मतसहित विजयी भए । सो वडामा यसअघि तत्कालीन एमालेका लछिन बुढा निर्वाचित भएका थिए । पार्टी एकताका बाबजुद नेकपाले उपनिर्वाचनमा साख जोगाउन नसकेको स्थानीय तहमा यो वडा पनि एक हो ।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–६ मा नेकपाका रामशरण थारु ८०० मतसहित विजयी भए । यो वडामा यसअघि काँग्रेसका रामसोहन थारु विजयी भएका थिए । उपनिर्वाचनमा काँग्रेसका श्रीकृष्ण थारुले ७३६ मत हासिल गरे ।
यस्तै, सल्यानको कुमाख गाउँपालिका–५ वडाध्यक्षमा नेकपाका धर्मे बुढाथोकी ७९२ मतसहित विजयी भएका छन् । यसअघि उक्त वडामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका हरिप्रकाश बुढाथोकी ७८८ मतसहित निर्वाचित भएका थिए ।
बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका–१ मा नेकपाकै मनराजे बुढा ३६७ मत हासिल गर्दै विजयी भए । यस वडामा अघिल्लो निर्वाचनमा काँग्रेसका खम्म दमाई निर्वाचित भएका थिए । उपनिर्वाचनमा काँग्रेसले गुमाएको स्थानीय तहमा यो पनि एक हो ।
अछामको मेल्लेख गाउँपालिका–५ मा नेकपाका रमेशबहादुर खड्का ७७८ मत हासिल गर्दै विजयी भए । यो वडामा पनि यसअघि काँग्रेसले जित हासिल गरेको थियो ।
डोटीको आदर्श गाउँपालिका–२ को वडाध्यक्षमा नेकपाकै रामबहादुर बोहरा विजयी भए । उनले ६६८ मत हासिल गरे । अघिल्लो निर्वाचनमा यस वडामा तत्कालिन एमालेका पदमसिंह बोहरा ५०२ मत ल्याएर विजयी भएका थिए ।
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–३ मा नेकपाका कृष्णबहादुर तामाङ ५२८ मतसहित वडाध्यक्षमा निर्वाचित भए । यस वडामा अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका फैरु तामाङ ४५४ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए ।
बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका–१ मा नेपाली काँग्रेसका गजेन्द्रबहादुर चन्द २१९ मत हासिल गर्दै विजयी भए । अघिल्लो निर्वाचनमा यो वडामा काँग्रेसकै कलशबहादुर चन्द १५८ मत ल्याएर विजयी भएका थिए ।
बैतडीकै पुर्चौडी गाउँपालिका–४ मा नेकपाका शैलेन्द्र धानुक ६६३ मतसहित निर्वाचित भए । सो वडामा अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका गौतमप्रसाद भट्ट विजयी भएका थिए ।
बैतडीकै दोगडाकेदार गाउँपालिका–४ वडाध्यक्षमा काँग्रेसका सुरेन्द्रप्रसाद भट्ट ५८४ मतसहित विजयी भए । यो वडामा यसअघि तत्कालीन एमालेका मानबहादुर विष्ट ४६९ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । पार्टी एकताका बाबजुद यहाँ नेकपाले आफ्नो साख कायम राख्न सकेन ।
Dec. 3, 2019, 10:45 a.m. Sanu
In case Lamjung Sundarbazar 2, previously it was won by the then CPN UML not Nepali Congress. Please correct it. Previously Mr. Lok Raj Pandey was elected as Ward Chairperson and he is currently working as District Coordination Committee Chairperson. So the post has remained vacant.